July 25, 2006, 5:22 pm Filed under: Others အခု ကိုကြီးဟန်နဲ့ ၂၅မိနစ်လောက် ငါစကားပြောလိုက်ရတယ်……… ရင်ထဲမှာ သ်ိပ်ကိုပျော်နေမိတယ်.. ညီမလေး ကိုကြီးကို ဘယ်တုန်းကမှ မမေ့ခဲ့ပါဘူး.. အကိုရင်းတစ်ယောက်လို အချစ်ရဆုံးလူသားတစ်ယောက်လို ကိုကြီးကိုညီမလေး သိပ်တွယ်တာခဲ့တာပါ……..ညီမလေး ဖုန်းမဆက်ဖြစ်လို့ မေ့နေတယ် မထင်ပါနဲ့ ကိုကြီးရယ်.. ညီမလေးမှာ အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် ၊ ညီမလေးဝါသနာတွေကြောင့် အသိပေါင်းများစွာရှိတယ်… ဘယ်နှစ်ရာရှိမလည်း………. ရှိစမ်းပါစေ………. ရင်ထဲမှာ ညီမလေးအချစ်ရဆုံး ကိုကြီးအတွက် နေရာမပျောက်သွားဘူး………. ချစ်သူဆိုတာ ညီမလေးအတွက် ကိုကြီးလောက်မှ အရေးမပါခဲ့တာ…….. ကိုကြီးနဲ့ညီမလေးကြား ထားရှိသော သံယောဇဉ်တွေက စမ်းရေထက် ပိုအေးမြတယ.်.. ကောင်းကင်တစ်ခွင်ထက်ပိုကျယ်ပြန့်တယ်………. ဆီမီးတွေထက် ပိုထွန်းလင်းတယ်…….. အရာအားလုံးထက် ပိုနွေးထွေးတယ်……… ကျောက်စိုင်ကျောက်သားတွေထက် ပိုခိုင်မြဲပါတယ်ကိုကြီး………